PEAR USSURIYSKAYA - ORODKA ROODHIDA AH
Ugu Weyn Ee Orodka roodhida ah
Maanta, qof kasta oo doonaya inuu abuuro beerkiisa gaarka ah uma baahna aqoon iyo xirfad gaar ah.
Ka dib oo dhan, leh daryeel habboon, ku dhowaad dhammaan wakiilada dalagyada beerta soo saaraan dalagga wanaagsan oo deggan.
Noocyo badan oo kala duwan oo geedo midho leh ayaa ku kori kara cimiladeena.
Xitaa sida "waqooyiga" wakiilka sida pear Ussuri uu awood u leeyahay in uu xidid ku yeesho beerahayaga.
Aan ka fikirno noocyada kala duwan ee isteroberi.
Kala duwanaanta qurxinta isteroberi Abuuruhu waa khabiirkii Ruushka Karl Maksimovich, kaas oo kala soocay noocyada kala duwan ee 1857. Geedku waa mid aad u sarreeya (10-15 m) oo leh qaro weyn oo taajir ah oo qaab ah guddi. Kala duwanaantan ayaa leh heer koritaan dhexdhexaad ah. Waxa kale oo jira geedo geedo ah.
Caleemaha waa kuwo dhalaalaya, cagaaran oo midabkiisu ka sarreeyaa, matag iyo iftiin hooseeya. Muuqaal khaas ah oo loo yaqaan 'Ussuri pear' waa urta la cayimay ee ubaxa.
Miraha 3-5 cm dhexroorka, waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, bisaylkiisa wuu dhammaaday muddadii dhammaadkii Agoosto ilaa horraantii Sebtembar. Diirka wuxuu noqon karaa mid cagaar iyo huruud ah, mararka qaarkood waxaa jira meel guduud ah oo dhinac ah. Jidhka cayayaanka noocan oo kale ah, inkasta oo macaan, laakiin tartiib, oo leh unugyo dhagax ah, waa caddaan ama huruud. Waxaad xaqiijin kartaa in la waayay unugyada dhagaxyada, waxaa jira in la siiyo midhaha si ay u bislaadaan. Markaas pear wuxuu noqon doonaa mid jilicsan iyo ka badan karo.
Ussuri pear characteristic ee kala duwanaanshaha, taas oo ah, isbedelka size, midabka iyo dhadhanka midhaha. Sidaa darteed, seedling kasta oo noocyada kala duwan waxay noqon kartaa wakiilka ugu horreeya ee kala duwan oo cusub oo isteroberi. Iyadoo ku saleysan xaqiiqda, pear Ussuri waxaa si firfircoon loo isticmaalaa beeraleyda ah ee taranta.
- iska caabbinta abaarta
- la'aanta baahida ciidda
- Kiimikada Ussuriyskaya waa noocyada ugu yar ee u dhaxeysa u dhaxeysa
noocyada kala duwanaanshaha
- dalagga ugu horreeya waa la goyn karaa 10-20 sano ka dib markii laga beerto
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo noocyada dambe ee isteroberi.
Beeraha loo yaqaan 'Ussuri pear' waxay u baahan tahay ciid wanaagsan oo leh heer aad u sarreeya oo biyo ah. Fasalkan Suurtagal maaha in la koro carrada cagaaran. Koofiyadu ma jecla meelaha ay dabayshu u heli karto. Wixii beerto waxay ku haboon tahay guga iyo dayrta. Marka laga beerto qodo guga for pears mustaqbalka waa in la sameeyaa ka hor, taas oo ah, dayrta. Haddii aad geedo ku darsato dayrta, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso booska 3-4 toddobaad.
Ceelku waa inuu ahaadaa 1-1.5m dhexroor iyo 70-80 cm qoto dheer. Ka hor intaan la dhicin Bacriminta waa in lagu dabaqo dhulka - 1 kg ash alwaax, 1.5 kg oo lime ah. Nitrogar waa in la sameeyaa oo kaliya guga. Sapling ayaa godka lagu riday, daboolay dhulka. Marka xigta, isaga oo xiga waxaa si qotodheer loogu hayaa saamiga dhici doona inuu taageero. In kasta oo xaqiiqda ah in pear Ussuri waa abaar u adkaysta, waxay u baahan tahay qoyaan isla markiiba ka dib markii laga beerto.
Sidaa darteed, seedling kasta waa in lagu waraabiyo leh xisaabinta 2-3 baaldiyo on geedka. Cayayaanka Ussuri waa warshad madax-is-gashi, sidaas darteed noocyada kala duwan ee loo baahan yahay geed-geedka geed kale oo loogu talagalay pollination.
Pear waa geed lagu jecel yahay biyo aad u badan, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in ay waraabiyo geedaha iyo geedo si joogto ah guga iyo xagaaga. Daadinta ayaa loo tixgeliyaa habka ugu wanaagsan ee waraabka. Iyada oo waraabinta sida, xididdada geedaha pear ugu fiican si aad u hesho biyo. Waxaad ku qodan kartaa wareeg ah wareeg ah oo qoto dheer leh 10-15 cm agagaarka geed kasta oo ku shub biyo halkaas. Marka heerkulka kor u kaco, xaddiga waraabinta waa in la kordhiyaa.
Neefsashada mallaarrada maaddooyinka ugu fiican, sida caws, caws, caleemo dhacday. Mulching ugu horeysay waa lagama maarmaan marka beeritaanka, ka dibna dayrta. Mulch ma aha oo keliya ilaalinta cayayaanka iyo dhirta waxyeellada leh, laakiin sidoo kale saldhig u ah koritaanka geed.
Beeraley kasta wuxuu ogyahay in dhirta hoyga ee xilliga qaboobaha ay tahay nidaam loo baahan yahay. Ussuri geedo geedo ah, inkastoo ugu yar u-adkaysi u, u baahan tahay hoy. Waxaad hoy u noqon kartaa qaybta hoose ee jirida cawska ama warqada, iyo barafka aad u baahan tahay si aad u sameyso hareeraha hareeraha geedka.
Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya ee koritaanka, pear ma u baahan tahay manjooyin guga. Horeba geedaha yaryar waa in ay ka qaadaan qayb ka mid ah kormeeraha xarunta, iyo laamaha dhinacyada waa in la gooyaa heerka kelyaha. Waqtiga xiga waxaad u baahan tahay inaad gaabisid kormeeraha xarunta. Intaa waxaa dheer, laamaha gaaban ayaa loo soo koobay si loo abuuro qaabka saxda ah ee taajka, taas oo ah, laamaha sare waa inay ka gaaban yihiin kuwa hoose. Gaabinta waxaa la samayn karaa 4-7 cm.
Pear u baahan tahay potassium, fosfooraska, nitrogen iyo, dabcan, Bacriminta organic. Sidaa darteed, hal mar 4-5 sano, 20-25 kg humus ayaa lagu darayaa, 0.5 kg ee superphosphate, 0.5-0.8 kg oo ah chloride potassium iyo 1 kg oo ah xumbo ayaa lagu daray. Bacriminta waxay u baahan yihiin inay noqdaan haanta, dhexroorka kaas oo ku jeeda dhexroorka taajka. Bacriminta Nitrogan waa in la isticmaalo hal mar sanadkii ka hor ubax.
Caleemaha geedaha ee Ussuri ayaa waxyeello u geysan kara caarada caarada, cagaarka iyo miraha.
Cayayaanka qumbadu wuxuu ka badbaaday jiilaalka kalluunka pear-ka, halkaas oo ay ukunteeda u bixiso guga. Cuntadiisu waa dheecaan geed. Calaamad muujinaysa joogitaanka bukaan-qaadashadani waxay u egtahay muuqaalka godadka (galls) caleemaha geedka. Si ay si wax ku ool ah ula tacaalaan cayayaankan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo caleenta cudurka leh oo leh xal sulfur kolloid ah (100 g halkii 10 litir oo biyo ah) inta lagu jiro xilliga nasashada, dhammaadka ubax iyo bilaha Luulyo iyo Agoosto.
Goobaha pear ah sidoo kale overwinters isteroberi ee burooyinkeeda iyo quudiyo on dheecaan. Haddii kubadaha cawlku ay muuqdaan caleemaha ("macmacaanka macdanta"), ka dibna ka hor inta aanad ubaxin kelyaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo dhirta xalalka diyaarinta oleocuprit, nitrafen, karbofos (90 g halkii 10 litar oo biyo ah), kemifos (10 ml 10 m halkii biyo), iwm.
Dufanka miraha waa cudur fungal ah oo muujinaya sida casaan, kordhaya dhibco dhinaca sare ee caleen. Waxaa la yaab leh, xayawaannada fangaskaan ka faafinayaan juniper, sidaa daraadeed waxaad u baahantahay inaad ku beerato hareeraha goobta, taas oo ka ilaalin lahayd isteroberi.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orodka roodhida ah 2020